I-Whatagraph: Dala ama-Beautiful Infographics avela ku-Google Analytics | Martech Zone
I-Whatagraph: Dala ama-Beautiful Infographics avela ku-Google Analytics
NgoMgqibelo, Ephreli 2, 2016 Douglas Karr
Masibhekane nakho, iGoogle Analytics iyinkinga yebhizinisi elijwayelekile. Kwabachwepheshe abachitha isikhathi esiningi endaweni yesikhulumi, kuyinto egcwele futhi eqinile analytics ipulatifomu esiyijwayele nokuthi singayihluza futhi siyinciphise ukuze sithole impendulo kunoma yimuphi umbuzo esingahle sibe nawo. Njengenhlangano, asilona ibhizinisi elijwayelekile kepha noma sinenkinga yokuhluza idatha kwesinye isikhathi.
Amakhasimende ethu - ngisho namakhasimende ezobuchwepheshe - ayaqhubeka nokulwa nokusebenza nokulinganisa analytics kuze kube seqophelweni lapho bekhululekile ukwenza ukumaketha okunolwazi nezinqumo zebhizinisi ngokuya ngemiphumela. Ngaleso sizathu, ngobuqotho sicindezele amaklayenti ethu ekungeneni ngemvume ku-Google Analytics, ukuthumela imibiko ezenzakalelayo noma ngisho nokwakha amadeshibhodi enziwe ngokwezifiso. Esikhundleni salokho, sithembele ezinhlelweni ezizenzakalelayo ezikhiqiza imibiko yokubuka konke elula yamakhasimende ethu.
I-Whatagraph ikuthatha igxathu eliya phambili, ukwakha idatha yeGoogle Analytics ibe yinhle i-infographics ezithintekile futhi zingabukwa ngesiphequluli noma zilethwe nge-PDF. Bhalisa, engeza i-akhawunti yakho ye-Google Analytics, khetha impahla yakho, bese uvuleka ngokushesha.
Okukhiphayo kuyashesha, kunesici esibonakalayo sayo yonke into analytics imethrikhi, kufaka phakathi:
Imibiko yansuku zonke, yamasonto onke, yanyanga zonke noma yonyaka kuze kube yimanje ngokuqhathaniswa nesikhathi sonyaka odlule
Inani lesibalo sabavakashi, emini, kufaka phakathi idatha entsha yokuqhathanisa neyokubuya
Izikhathi eziphelele, isikhathi seseshini esimaphakathi nezinga lokushaya
Inani lokubukwa kwamakhasi, ukubukwa kwamakhasi ngeseshini ngayinye, neseshini ngesiphequluli
Isikhathi seselula, ithebhulethi nedeskithophu
Kuqubuke imithombo yethrafikhi yokusesha, yezenhlalo, eqondile kanye neminye imithombo ephezulu
Izikhathi ngezwe nedolobha
Izinhlobo zePro ne-Agency zinikela ngeminye imininingwane, kufaka phakathi:
Amakhasi athrendayo akhuphuka ekubukweni nokwehla kokubukwa
Ingqikithi yamagoli aqediwe, inani, kanye nesilinganiso sokuguqulwa
Amakhasi anezinga lokukhuphuka elikhuphuke kakhulu, isilinganiso sokuphakama okuphezulu kakhulu, nokubalwa kokuphuma
Iziteshi ezinokukhuphuka okuphezulu kakhulu kwezimoto, ukwehla okuphezulu kuthrafikhi, ukwanda okuphezulu kakhulu kwezinga lokushaya, kanye nezinga lokuthuthuka elithuthukiswe kakhulu
Amakhasi aphezulu nezikhathi zawo zokulayisha
Ukusesha kwangaphakathi okudume kakhulu
Amadivayisi okungenzeka ukuthi abangela izingqinamba ngoba anezinga eliphezulu kakhulu lokushaya
izibalo ze-infographic "width =" 640 ″ height = "2364 ″ />
Uma ubhalisa njenge-ejensi, ungagunyaza ngisho nokubhala imibiko yokukhipha, ungeze isikimu sakho sombala nelogo.
Ungabhalisela i-Whatagraph esivivinyweni samahhala bese uthuthuka ngemuva kwezinsuku eziyi-14 uye kunguqulo oyithandayo.
Ukuphela kokuthuthuka engingathanda ukukubona kungxenyekazi enjengaleli yikhono lokucacisa ingxenye esikhundleni sokuthekelisa yonke idatha. I-Google Analytics inenkinga enkulu nge i-referrer spam, ngakho-ke izinombolo eziyisisekelo zingashintshwa kakhulu ezindaweni ezinamanani amancane omgwaqo.
Tags: imibiko yezibalo yonyakaimibiko ezenzakalelayoisikhathi sesikhathi esimaphakathiizinga lokunciphisaizikhathi zesiphequluliizinga lokuguqulwaimibiko yezibalo zansuku zonkeukubalwa kwezivakashi nsuku zonkeukubala kokuphumai-google analytics agencyiziteshi ze-google analyticsizinhloso ze-google analyticsizibalo ze-google infographicamakhasi we-google analytics athrendayoinfographicusesho lwangaphakathiidatha entsha yezivakashi neyokubuyaukubukwa kwekhasiizikhathi zokuhlaziya ezipheleleinani lezivakashiimithombo yomgwaqoimibiko yezibalo yamaviki onke
Izinhloso eziyi-10 Zokukhangisa nge-Facebook
Kuyini Ukuzenzakalela Kokumaketha? Okudingayo Ukwazi…
Ngo-Apr 6, i-2016 ku-10: 05 AM
'I-buggy' encane, ngokwesibonelo lapho ulanda umbiko ku-PDF kunemidwebo ethile elahlekile enikeza izingxenye ze-infographic engenamsebenzi 🙁
Ngo-Apr 6, i-2016 ku-11: i-15 PM
Kuyathakazelisa - angibanga nezinkinga lapho, uBarry. Ngicabanga ukuthi ngabe babenesikhathi esithile sokuphumula.
Ngo-Apr 7, i-2016 ku-5: 38 AM
Barry, ngiyabonga ngempendulo yakho! Njengoba uDouglas asho, sasithuthukisa uhlelo. Manje konke kusebenza ngokugcwele. Uma usabhekene nezinkinga ezithile, vele usishiyele umugqa ngakho!
Siphesihle mthiyane (@siyabonga_mthiyane)
Ngo-Apr 13, i-2016 ku-12: i-18 PM
Kwangena njengosizo olukhulu kusukela insizakalo efanayo ngokubuka iyekile ukusebenza ngemuva kokuthatha kwabo